Puntland oo billowday qeybinta Kaararka Cod bixinta doorashooyinka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Puntland oo billowday qeybinta Kaararka Cod bixinta doorashooyinka
Guddiga Kmeel gaarka ah ee doorashooyinka dowlad Goboleedka Puntland ayaa Maanta waxaa ay degmooyin ka tirsan Gobolka Karkaar ka billaabeen kaararka Cod bixiyeyaasha ee doorashooyinka qof iyo Cod ee Golaha degaanka.
Xubnaha Guddiga Kumeel gaarka ah ee doorashooyinka ayaa waxaa ay Maanta kaararka Cod bixiyeyaasha siiyeen dadka doonaya inay ka qeyb galaan oorashada, kuwaas oo biray isaga diiwaan geliyay degmooyinka, Qardho, Eyl, Ufeyn iyo degaannada hoostaga.
Gudoomiyaha Gudiga KMG ah Doorashooyinka Puntland xafiiska Gobalka karkaar Maxamuud Ismaaciil oo daah furay kaararka cod bixinta ayaa sheegay in muddo 8 Cisho ay ay socon doonaan qeybtinta kaararka si loo qabto doorashooyinka horudhaca ah ee Golaha degaanka ee Saddexda degmo.
Waxaa uu sheegay in dadkii horay isku diiwaan geliyay kaliya la siinayo Kaararka, waxaana uu ka codsaday inay si wanaagsan kaararka coe bixinta u qaataan.
Puntland ayaa 26 Bishaan waxaa ay qabaneeysaa doorashooyinka tijaabada horudhaca ah ee qof iyo Cod, kuwaas oo lagu dooranayo Golaha degaanka degmooyin ka tirsan Gobolka Karkaar.
Previous articleVietnam oo farriin u soo dirtay Farmaajo iyo Rooble
Next articleWeerar dhimasho badan sababay oo maanta ka dhacay Ruushka